နေအိမ် - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
1. သတ္တုကုတ်အင်္ကျီ: သွပ်အပေါ်ယံပိုင်း, Aluzinc အပေါ်ယံပိုင်း,(15%အယ်လ်, 25%အယ်လ်,55%အယ်လ်)
2. အဖုံးအုပ်အထူ: 20-275g / m2, စိတ်ကြိုက်အပေါ်ယံပိုင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်.
3. ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ကွိုင်, စာရွက်, ချည်, ကြွေပြား, ပြွန်
4. နှစ်စဉ်စွမ်းရည်: 1000,000 တန်ချိန်
5. အကျယ် 914mm / 1000mm / 1060mm / 1219mm / 1250mm
1. အဖုံးအမျိုးအစား: ON, HDP, PVDF
2. အဖုံးအုပ်အထူ: 10-30က(ထိပ်တန်း), 5-10-15က(နောက်ကျော), စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု
3. ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ကွိုင်, စာရွက်, မြှောင်းပုံ tile ကို
4. တောက်ပသောအမြင့် 85 ဒီဂရီ, နိမ့်တောက်ပ 30 ဒီဂရီ
2. မာကျော：CRC，နှင့် CRC အပြည့်အဝ.
3. လျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်း: သွပ်ရည်စိမ်ကုန်ကြမ်း
1.Hot roll တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ။ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူထံမှ Hot roll ကုန်ကြမ်းကို ၀ ယ်ပါ,ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် materal ကုန်ကြမ်းများ၏အရည်အသွေးကောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.2.QCအလွန် strict.QC န်ထမ်းထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးသည်
1.High GlossThailand သည်ဖောက်သည်များကပိုမိုလိုအပ်သောမြင့်မားသောတောက်ပသောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်တောင်းဆိုသည် 80% တောက်ပ ,Jianglin Steel သည်ကွိုင်တိုင်းကိုစမ်းသပ်သည်။ 2.Color test ထိုင်းစျေးကွက်တွင်သဘာဝအညိုရောင်ရှိသည်,nuvo အပြာရောင် ,အလွန်ရေပန်းစားသောအရောင်ဖြစ်သောအစိမ်းတောက်တောက် ,Jianglin သံမဏိသည်အရောင်တိုင်းနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
1.Tangshan ရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်သည် 30%-50%.2. Hanxing Wu'an productionရိယာသည်.3ပြီလ ၃.၃ တွင် Jiangsu ပြည်နယ်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်, 14 ကြိမ်မြောက်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ပထမနှစ်တွင်တောင်ပိုင်း rebarIn ၏ကန့်သတ်ထုတ်လုပ်မှု, တည်ထောင်၏ 100 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့
အဆိုပါ galvalume အပေါ်ယံပိုင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပါဝင်သည်ဟုအလွိုင်းဖြစ်ပါတယ် 55% လူမီနီယံ, 43.4% သွပ်နှင့် 1.5% အလေးချိန်အားဖြင့်ဆီလီကွန်, သောစဉ်ဆက်မပြတ်ပူကျဆင်းလာဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်သံမဏိမှလျှောက်ထားသည်. Galvalume သံမဏိပြားသည်လူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုပေးသည် (လူမီနီယံ)
1.CRC （Base metal st တောင့်တင်းခိုင်မာမှုနှင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကတာဝန်ရှိသည် ။Zinc Coating သည်၎င်းတွင်ချေးမသောခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။, အပူခုခံ, ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်စက်ပစ္စည်းများ။ ၃. ဓာတုဗေဒဆေးကြောခြင်းဖြင့်ကော်နှင့်ကော်ပြား၏မျက်နှာပြင်နှင့်အညီမျက်နှာပြင်အကြားကော်လာမှုကိုကာကွယ်သည်။
Tianjin တွင်တည်ရှိသည်, Jianglin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်းသည်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအထိရောက်ရှိသည် 700,000 တန်ချိန်. ထုတ်ကုန်များတွင် Zn billet ပါဝင်သည်, ပေးပါ, PPGI, PPGL, tile နှင့် Tube.
"မဆိုပြproblemနာဖြစ်ပျက်，ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးပြန်အမ်းငွေကပ်, ထို့နောက်ဖြေရှင်းချက်ကိုဆွေးနွေးပါ, မည်သည့်နောက်မှကုန်ကျသည်, Jianglin ကအမြဲတမ်းတာဝန်ရှိတယ်" ---Jianglin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း၏ Yuan weilin စီအီးအို